शब्द, एक्सेल र पावरपोइन्ट पूर्वावलोकन एन्ड्रोइड फोनहरू को लागी उपलब्ध Androidsis
माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल र पावरपोइन्ट अब पूर्वावलोकन फारममा एन्ड्रोइड फोनहरूको लागि उपलब्ध छ
हामीसँग अन्त्यमा, बीटा मोडमाको पछिल्लो संस्करणहरु माइक्रोसफ्ट एक्सेल, वर्ड र एन्ड्रोइड फोनहरूको लागि PowerPoint। अघिल्लो संस्करणले केहि प्रयोगकर्ताहरूको लागि कन्फ्युजन निम्त्याउन सक्छ किनभने एकले उनीहरूलाई हामीसँग केही समयको लागि फरक राख्न भन्न सक्दछ। र केवल उत्तर यो हो कि तिनीहरू नयाँ छन्, उत्तम-डिजाइन अनुप्रयोगहरू जुन स्वतन्त्र रूपमा अद्यावधिक गर्न सकिन्छ।
त्यसोभए माइक्रोसफ्टले आजदेखि अफिस अटोमेसनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोगहरूको पूर्वावलोकन जारी गरेको छ। यी बेटाहरू गुगल प्ले द्वारा प्रस्ताव गरिएको च्यानलबाट आएको हो ताकि प्रयोगकर्ताहरूले अनुप्रयोगहरूलाई सही तरीकाले अपडेट गर्न सक्दछन् र Google+ समुदायमा भाग लिन सक्दछ। यसले माइक्रोसफ्टलाई यी महत्वपूर्ण अनुप्रयोगहरू सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
1 माईक्रोसफ्ट फिर्ता रिंगमा
2 माइक्रोसफ्ट वर्ड
3 माइक्रोसफ्ट एक्सेल
4 माइक्रोसफ्ट पावरपोइन्ट
5 Apps अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न बीटामा कसरी भाग लिने
माईक्रोसफ्ट फिर्ता रिंगमा
राम्रो लडाकू जस्तो माइक्रोसफ्ट पहिले नै दस्ताने तैयार संग छ लागि सबै भन्दा राम्रो लडाई उनको एक सबै भन्दा राम्रो वार संग एक, र यो कार्यालय अफिस सुइट हो। एउटा अफिस जुन एन्ड्रोइडमा तीन उत्कृष्ट अनुप्रयोगहरूसँग फर्कन्छ: माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल र पावर पोइन्ट।
तीन अनुप्रयोगहरू आउनका लागि मोबाइल उपकरणहरूमा शासनकाललाई कब्जा गर्नुहोस् र यसको कारणहरू यसको कारणहरू, किनकि सफ्टवेयर विकासमा उत्कृष्टता माइक्रोसफ्टबाट प्राय: जहिले सम्मिलित छ। यदि तपाईं बीटामा भाग लिन चाहानुहुन्छ भने, यो पोष्टको अन्तमा म यी प्रत्येक अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्ने चरणहरूमा टिप्पणी गर्नेछु।
शब्द एक सबै भन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम हो कागजातको सिर्जनाको लागि, र हामी पहिले नै यसमा हातहरू राख्ने अवसरको लागि प्रतिक्षा गरिरहेका थियौं कि यसले मोबाईल उपकरणलाई टेलिफोनमा के दिन सक्दछ।
हामीसँग अन्त्यमा, यहाँ छ एक अनुप्रयोग जुन १००MB तौलको छ र तपाईंलाई कागजातहरू हेर्न, सिर्जना गर्न र सम्पादन गर्न, ड्रपबक्ससँग एकीकरण गर्न अनुमति दिन्छ, Office 365 XNUMX क्लाउडमा पहुँच गर्नुहोस् र यसले तपाईंको फोनमा Office के हुन्छ भन्ने सबै स्वाद ल्याउँदछ जब यो डिजाईनको कुरा आउँदछ।
हामी अनुप्रयोग सुरूवात गर्छौं र हामी एक धेरै सफा ईन्टरफेस पाउँछौं, एक मिनी बहु-चरण ट्यूटोरियल, र सिंकको लागि खाता पहुँच गर्न क्षमता। सुरूबाटै, यसले हामीलाई सोध्दछ कि यदि हामी यस क्लाउडमा भएका सबै कागजातहरू सम्पादन गर्न ड्रपबक्स खाता थप्न चाहन्छौं भने।
सबै संग एक धेरै न्यूनतम स्पर्श र धेरै धूमधाम बिना फ्लैट रंग को उपयोग जसले तपाईंलाई अनुप्रयोगमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू द्रुत रूपमा हेर्न अनुमति दिँदछ। यस अवस्थामा, मुख्य स्क्रिनमा, ढाँचा छान्नका लागि नयाँ कागजातमा क्लिक गर्नुहोस्। हामी एउटा छनौट गर्दछौं र हामी पहिले नै हाम्रो पहिलो कागजात सिर्जना गर्दै छौं यसलाई साकार नगरी पनि।
छोटो, एकदम राम्रो अनुप्रयोग जुन उत्तम रूपमा सार्दछ, ढिलाइ बिना नै र यससँग सबै उपकरणहरू छन् जुन यसको कोटीमा एक उत्तम बनेको छ।
एक्सेलको साथ हामी M M एमबीमा जान्छौं र यो दृश्य पक्षमा उस्तै रहन्छ, त्यसैले हामी एक उत्तम अफिस ऑटोमेसन सूटको अगाडि भएको महसुस गरिरहन्छौं।
सूत्रहरू, तालिकाहरू, चार्टहरू, टिप्पणीहरू, PivotTables, Sparklines, ससर्त स्वरूपण र फोन र ट्याब्लेटका लागि एक्सेलमा बढि धेरै तपाईलाई पर्खिरहेका छन्। वर्ड जस्तै, योसँग ढाँचाको सर्तमा समान डिजाइन छ र प्रयोगकर्तालाई स्प्रेडशिटहरू सिर्जना गर्न आवश्यक सबै चीजहरू प्रदान गर्न यसको आफ्नै विचित्रताहरू छन्।
तेस्रो, र सूटमा अन्तिम, तपाईंलाई स्लाइडहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। अन्य दुईको जस्तै आधार अनुसरण गर्नुहोस्, त्यसैले अनुप्रयोगको भारी मेगाबाइटमा डर नमान्नुहोस्।
माइक्रोसफ्टको डिजाइन र राम्रो काम केमा समान हो त्यसैले एप्लिकेसनले सबै सर्तहरूमा काम गर्दछ। Se एक PowerPoint कागजात सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईं विभिन्न ढाँचाहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ स्लाइडहरू सिर्जना गर्न र यसरी पूर्ण स्क्रीनमा हेर्नुहोस् कसरी प्रस्तुतीकरण हुनेछ। एक अनुप्रयोग जसले देखाउँदछ कि एन्ड्रोइडले यो कोटीमा के गर्न सक्दछ।
Apps अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न बीटामा कसरी भाग लिने
माइक्रोसफ्टले Google+ बाट बीटा कार्यक्रममा भाग लिन्छ सबै प्रयोगकर्ताहरूसँग सम्पर्कमा रहन जसले यसको कुनै पनि download अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्दछ। याद गर्नुहोस् कि जब तपाइँ परीक्षक बन्नुहुन्छ, अनुप्रयोग तपाइँको उपकरणको लागि केहि मिनेटमा वा अधिकतम3घण्टामा उपलब्ध हुनेछ।
पहिलो हो बेटा समुदायमा भाग लिनुहोस् Microsoft Office बाट यो लिङ्क.
निम्न छ परीक्षक बन्नुहोस् यी तीन मध्ये कुनै पनि अनुप्रयोगमा: http://aka.ms/previewword, http://aka.ms/previewexcel y http://aka.ms/previewpowerpoint
बाट ती समान लिंकहरू तपाईं डाउनलोड पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ अनुप्रयोगहरूको
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल र पावरपोइन्ट अब पूर्वावलोकन फारममा एन्ड्रोइड फोनहरूको लागि उपलब्ध छ
जर्ज कार्लोस भन्यो
के तपाईंलाई थाहा छ यदि ट्याब्लेटहरूको लागि उस्तै छ?
जर्ज कार्लोसलाई जवाफ दिनुहोस्
ट्याबलेटका लागि उपलब्ध, हो tb
जोस एन्जेल रोड्रिग्ज भन्यो
बेटा समुदायमा भाग लिनको लागि लिंक भाँचिएको छ
होसे एन्जेल रोड्रिगलाई जवाफ दिनुहोस्
बेटा समुदायमा भाग लिनको लागि लिंकले काम गर्दैन
फर्नान्डोलाई जवाफ दिनुहोस्
यो पहिले नै सुधार गरिएको छ!
ओप्पो आर and र ओप्पो आर Plus प्लस आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरियो
[APK] मेसेन्जर भिडियो कलहरू स्पेनमा पहिले नै काम गरिरहेको छ